STORY - Evisitnepal
स्विडेनको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनिलाइ हामिले बर्षौँ सम्म "मेरो मोबाइल" भनेर बस्यौँ –Nir Bahadur जि को फेसबुकबाट।।।।
स्विडेनको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनिलाइ हामिले बर्षौँ सम्म “मेरो मोबाइल” भनेर बस्यौँ।हाम्रो खर्बौ revenue देश बाहिर गइसक्यो,जादैछ।हाम्रा अर्बौं पैसा बैंकमा कुहिएका छन्,नेपाली जनतासंग करिब ३०० टन भन्दा बढिको gold reserve छ।तर नेपालिहरु मिलेर नेपालिहरुकै शेयरमा एउटा “हाम्रो मोबाइल” कम्पनी खोल्न सकेनौँ।यहाँ अवसरको कमि हैन भिजन नभएका नेता र जनताहरुको कमि छ।हाम्रो ४० लाख युवाहरुले मरुभूमिमा […]
डम्बर खतिवडा को यथार्थपरक लेख–BY shovakar Subedi
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘एक्जिस्टेन्स कम्स बिफोर इसेन्स एन्ड इसेन्स इज इसेन्स इटसेल्फ ।’ कुरालाई अलिक प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरण हेरौँ । कुनै मूर्तिकारले ढुंगालाई छिनोले ठुंग्दै, खोप्दै जान्छ । हेर्दाहेर्दै ढुंगामा कुनै न कुनै आकृति देखा पर्छ, जुन केही बेरअघिसम्म ढुंगामा थिएन । त्यो कहाँबाट आयो ? ढुंगामा आकृति बन्नुअगाडि नै आकृति मूर्तिकारको मस्तिष्कमा […]
बेबिलोनको कस्साइटबाट पूर्व हिडेका कस्साइट्सहरु अफगानिस्तानबाट दक्षिण नलागेर पहाडैपहाड अझ पूर्व उक्लेका थिए । कस्साइटबाट आएकाले यिनहरु कसबाट अपभ्रंस भएर खस हुनपुगे । काश्मिर (खस/कसमिर. खस /कस हरुको मिर = अग्लोस्थान), कुमाउँ, गढवालबाट अझ पूर्व लाग्दै यिनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा आएर बाह्रौँ सताव्दिमा राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ, जसको पूवी साँध गण्डकी सम्म थियो । खसहरु आर्य […]
सर्वप्रथम यो लेख उनै योगेश्वरलाई समर्पण, जसको प्रतापले उनको बारेमा जान्ने र लेख्ने इच्छा जन्मियो । त्यसपछि मेरा समस्त ज्ञात अज्ञात गुरुहरुलाई समर्पण, जसका दिक्षाले यति लेख्न समर्थ भएँ । यो लेख सनातन धर्मको निन्दा गर्न नभएर विभिन्न स्रोतहरूको अध्ययन मनन पश्चात् तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्नको रूपमा लिईदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु । खोजीको […]
दि फ्रेन्ड्स (कथा) –The Friends – A story by निर्मला खड्का
दि फ्रेन्ड्स (कथा) फ्रेन्डस अनि फ्रेन्डशिप । संसारिक सबै भन्दा स्वादिलो शब्द । हर उमेरकालाई लोभ्याएर राख्ने । अझ भनौं युवाहरु माँझ बिस्वसिलो अर्थ बोकेको शब्द हो यो । आन्तरिक भावनाले निथ्रुक्क रुझेको सम्बन्ध यहि नै होला । त्यसैले त यो सम्बन्धमा उमेरको कुनै हद बन्दि छैन । न त लिङ्गमा नै कुनै मतभेद छ […]